ननस्टप विशेष Archives - Page 38 of 43 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काडमाडाैं, २८ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलार्इ कारवाही गर्न माग गर्दै नयाँ शक्ति नेपालका संयाेजक डा. बाबुराम भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पुगेका छन् । देउवा सरकारमा गृहमन्त्री रहेका जनार्दन यसअघि उर्जा मन्त्री हुँदा गरेका कामकाजका फेहरिस्त लिएर बाबुराम प्रम देउवाकाेमा पुगेका हुन् । डा. भट्टरार्इले उर्जामन्त्री हुँदा जनार्दनले ठूलाे कमजाेरी गरेकाे दावी गरेका छन् […]
२८ असार २०७४, बुधबार १५:१० July 14, 2017 Nonstop Khabar
अाशिष दर्नाल काठमाडाैं । रत्नपार्कमा रहेकाे पुरानाे बसपार्क हटाएर २५ तले भ्यू टावर बनाउने याेजना तुहिएकाे छ । अब साे ठाउँमा भ्यू टावर नबन्ने पक्कापक्की भएकाे छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाले भ्यू टावर निर्माता कम्पनीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि खास काम नगरेपछि कम्पनीकाे सम्झाैता नै रद्द गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेकाे छ । जलेश्वर विकाेइ स्वछन्द नामकाे […]
२७ असार २०७४, मंगलवार १४:०० July 12, 2017 Nonstop Khabar
दाङ, २७ असार । तुलसीपुरका व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठकाे अपहरणमा सम्लगन् पुजा घर्तीलार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । घर्तीले अाफ्ना बाबुकाे निर्देशन अनुसार व्यापारी श्रेष्ठलार्इ तुलसीपुरबाट बाेलाएर सल्यान लगेकी थिइन । सल्यान पुगेपछि पुजाका बाबुकाे टाेलीले उनलार्इ अपहरण गरेर केही दिनपछि हत्या गरेकाे थियाे । बाबु र छाेरी मिलेर व्यापारी अपहरण गरेर हत्या गरेकाे याे घटना […]